Boş zaman / Fotoana fialan-tsasatra – Diyaloglar | OpenTran
Boş zaman / Fotoana fialan-tsasatra – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Boş zaman / Fotoana fialan-tsasatra – Diyaloglar
William: Ann, ahoana no andanianao ny fotoana malalaka anananao?
Ann: Tsy dia manana fotoana malalaka be aho amin'izao andro izao. Fantatrao fa miasa mafy amin'ny diako aho. Fa rehefa manana fotoana malalaka aho dia aleoko mandany izany amin'ny fianakaviako na ny namako.
William: hitako. Midika izany fa manana fialamboly ve ianao? Sa misy hetsika tianao atao amin'ny fotoana malalaka anananao?
Ann: Ie, mazava ho azy. Manana fialamboly aho. Manangona karatra paositra sy hajia aho. Raha ny momba ny hetsika dia ny ankafiziko rehetra dia tiako ny mitaingina ranomandry sy bowling. Fa ny fialam-boly tiako indrindra dia ny famakiana boky tsara na ny fijerena horonantsary tsara.
William: Tokony holazaiko fa manana zavatra iraisana iraisana isika. Manangona hajia ihany koa aho, toy ny bowling miaraka amin'ny namako, ary mankafy mijery sarimihetsika mahaliana. Fa tsy mpankafy mamaky aho.
Ann: mahamenatra, William. Mihevitra aho indraindray fa tsara kokoa ny boky noho ny sary mihetsika. Manome anao ny tantara manontolo ny boky fa ny sarimihetsika kosa mamela ampahany lehibe manandanja.
William: Marina angamba ny anao, Ann. Misy boky mahaliana azonao omena ahy hovakiako?
Ann: Amin'izao fotoana izao dia mamaky «The Iliad» an'i Homer aho ary tena mankafy ny tantaran'ny Gresy taloha. Raha tsy tianao ny boky tantara dia mamporisika anao aho hamaky ny «The Client» nosoratan'i John Grisham. Mampientam-po tokoa izany. Mampiato anao amin'ny fisalasalana rehetra izany.
William: Oh, tiako ny zavatra mampihetsi-po, indrindra raha misy fisalasalana ao anatiny. Tena hamaky ity boky ity aho. Ankoatr'izay dia te-hanasa anao ho amin'ny sarimihetsika vaovao aho. Ity dia kinova vaovao an'ny «Sherlock Holmes» ary lazain'izy ireo fa tena tsara.
Ann: Tsy dia tiako loatra ny tantara mpitsongo fa hanaiky ny fanasana nataonao aho. Tsy nandia sinema nandritra ny taona maro aho. Raha tsy tiako ilay horonantsary dia tena hankafy ny popcorn sy Coke aho.
William: Tsara! Faly aho fa ho avy ianao. Azoko antoka fa hanana fotoana mahafinaritra isika.
Ann: Raha miresaka momba ny fialam-boly ataontsika eto isika, inona no hevitrao momba ny fitosahana amin'ny herinandro ambony?
William: Toa tsara! Iza koa no ho avy?
Ann: fitsingerenan'ny andro nahaterahako amin'ny herinandro ambony ary tiako ny handany azy io amin'ny namako. Inona no lazainao?
William: Raha ny hevitro dia hevitra tonga lafatra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Miditra aho. Manisa ahy. Raha ny marina dia tena mahay mitendry bowling aho.
Ann: Tsy ratsy koa aho. Ho hitantsika hoe iza no mitokona bebe kokoa.
William: Azoko antoka fa hanana fotoana mahafinaritra isika. Toa tsy fialam-boly mihintsy no hany fialam-boly tsy zarainay. Hatraiza ny hatsaranao amin'izany?
Ann: Skating hatramin'ny fahazazako. Ka, afaka miteny aho fa tena mpandeha ranomandry tena mahay aho. Efa nanandrana nilalao ranomandry ve ianao?
William: Ie, indray mandeha ihany. Taorian'izany dia nanapa-kevitra aho fa mpandeha ranomandry mahatsiravina. Nianjera imbetsaka aho ary naratra mafy ny tongotro.
Ann: hitako. Saingy ny fotoam-pivoriana fitsangatsanganana ranomandry iray dia tsy ampy hahatongavana ho mpanao siklazy tsara. Manao fanazaran-tena mandritra ny taona maro ny olona. Raha tianao afaka miara-mandeha any izahay indraindray ary hampiofana anao aho.
William: mahafinaritra izany! Azoko antoka fa mila fanazaran-tena amin'ny skater an-dranomandry za-draharaha aho.
Ann: Ok, raha izany. Hanao izany isika aorian'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako.
Polis Memuru ve Vatandaş Arasında Eo anelanelan'ny polisy sy ny olom-pirenena
Komşular Hakkında Şikayet Etmek Fitarainana momba ireo mpiara-monina
Dişçide Ao amin'ny The Dentist